Shina mora mpamokatra vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy ny mpamatsy | Vondrona mahazatra
Atrikasa fananganana vy no karazana tranobe noforonin'orinasa lehibe izay misy andry vy, varahina sy purlin
Ny firafitry ny vy dia mitana ny mpandray anjara lehibe amin'ny fananganana atrikasa vy. Ny tafo sy ny rindrin'ny atrikasa vy dia mampiasa isan-karazany
karazana takelaka izay hipetaka rehefa mivory, tsy mamela varavarana misokatra. Vokatr'izany, ny atrikasa vy vita amin'ny vy dia afaka mitoka-monina
tontolo iainana ivelany. Noho ny vidiny sy ny vanim-potoana fananganana fohy, ny rafitry ny vy dia nampiharina tany amin'ny sehatry ny indostria sy
fananganana trano tsy indostrialy. Araka ny karazana vy, atsy fananganana atrikasa vy vita amin'ny vy orinasa dia azo sokajiana
amin'ny adidy maivana sy mavesatra.
Manaraka: Soavaly matevina
Trano fitehirizam-bokatra vita amin'ny indostrialy